Iindaba - Ukuphucula ukhuseleko lwabasebenzi ngokubeka esweni ukuba sesichengeni kwiikhemikhali eziyityhefu
Sisebenzisa iikuki ukuphucula amava akho.Ngokuqhubeka ukhangela le sayithi uyavuma ukusebenzisa iikuki.Ingcaciso engaphezulu.
Rhoqo kwimizuzwana engamashumi amathathu umsebenzi uyasweleka ngenxa yokuchanabeka kwiigesi ezinetyhefu kwindawo yokusebenza.
Ion Science's Cub personal volatile organic compound (VOC) igas detector inxitywa kwindawo yokuphefumla ukujonga ukuvezwa kweegesi eziyityhefu. Oku kunceda ukugcina oogxa bekhuselekile emsebenzini.
Abacoci bococeko emsebenzini benza uvavanyo lomngcipheko kwaye benze uphando malunga nempilo yasemsebenzini ngokubeka iliso ngokuchanekileyo amanqanaba okuvezwa. Ezi zidla ngokuhlalutywa kusetyenziswa izixhobo ezikhethekileyo ezintsonkothileyo ezirekhoda idatha, efana ne-Ion Science Cub.
Abacoci bokucoca emsebenzini bajolise kulawulo lwengozi yempilo besebenzisa iindlela ezingabizi kakhulu kunye nezisebenzayo ngokusombulula kunye nokuvavanya imingeni ebonakalayo.
Oku kuvumela ukuphandwa kweziphumo zempilo zexesha elifutshane kunye nexesha elide lokuvezwa kwexesha elide nelibukhali kwiigesi ezinetyhefu kunye neengozi.Oku kwenza ukuba amashishini aphuhlise iimpendulo ezifanelekileyo kwimigangatho yomthetho.
Njengazo zonke ii-detectors ze-PID, umceli mngeni ophambili kukufunda okuphezulu kakhulu / okuphantsi xa kukho ukufuma.I-Ion Science MiniPID isusa ngokupheleleyo imiphumo yokufuma ngokusebenzisa iteknoloji ye-electrode yocingo olunelungelo elilodwa lomenzi kunye neteknoloji yokuchasana nongcoliseko.
Inketho ekhethiweyo kukuphelisa ngokupheleleyo nayiphi na ingozi, kodwa ukuba oku akunakwenzeka, ukuguqulwa kwendlela yokusebenza ngokutshintsha izixhobo zokukhusela zomntu zihlala ziqeshwe njengenxalenye yamanyathelo okulawula.
Ukugcinwa nokuhlolwa kuyafuneka kuba ukuba iPPE iyasilela, ayisayi kuphinda ibonelele ngokhuseleko olwaneleyo, ishiya abasebenzi besengozini.
Izixhobo zokukhangela igesi eziphathwayo zihlelwa njengodidi lwezixhobo zokukhusela zomntu ezenziwe ngokhuseleko lwabalingane engqondweni, ngokukodwa ukuzikhusela kwiingozi zegesi ngokuvumela uvavanyo olukude lweendawo ngaphambi kokungena kwindawo.
Ezi zixhobo zincinci zibalulekile kwizicelo ezininzi apho iingozi zegesi zinokuthi zenzeke.Zikwayindlela yodwa yokubeka iliso ngokuqhubekayo indawo yokuphefumla yomqhubi ngelixa uhamba kwaye umile.
Ukubeka iliso ngokubanzi kubhekisa “kwisampulu yomoya,” kodwa kunokufuna iisampulu zebhayoloji, ezifana nomchamo okanye umoya.
Ngokudibanisa abagcini bedatha kunye nee-detectors ezichanekileyo ezifana ne-ION Cubs, ukujonga ngokukhawuleza kwe-VOCs kunokufezekiswa.
Inxitywa kwindawo yokuphefumla, iCub 10.6 eV yobuqu ye-VOC yokukhangela igesi ichonga iikhompawundi eziguquguqukayo ze-organic ukugcina ukhuseleko lwabasebenzi kwindawo yokusebenza.
ICub TAC 10.0 eV sisijongi serhasi yebenzene yobuqu yokubeka iliso ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo kweTotal Aromatic Compounds (TAC) kukhuseleko lwabasebenzi emsebenzini.
Ion Science.(Matshi 18, 2022)
I-Ion Science."Ukuphucula uKhuseleko lwaBasebenzi ngokuBeka iliso kwiMichiza eyityhefu".AZOM.Ngomhla we-19 kuMatshi, ngo-2022..
I-Ion Science.”Ukuphucula uKhuseleko lwaBasebenzi ngokuBeka iliso kwi-Toxic Chemical Exposure”.AZOM.https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=21394.(Ifike nge-19 kaMatshi ngo-2022).
Inzululwazi ye-Iyoni.2022.Ukuphucula ukhuseleko lwabasebenzi ngokubeka esweni ukuba sesichengeni kwiikhemikhali eziyityhefu.AZoM, efunyenwe ngoMatshi 19, 2022, https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=21394.
I-AZoM ithethe noGqr. Rajashekar Badam we-JAIST ukuba axoxe ngendlela yakhe yokwenziwa kwe-anode esandul' ukuveliswa enokuthi ivule indlela yokutshaja ngokukhawuleza kweebhetri ze-lithium-ion.
I-AZoM kunye nomphandi weYunivesithi yaseNorthwestern uMichael Jewett baxoxe ngenkqubo entsha esebenzisa ibhaktheriya ukuba ibambe i-carbon dioxide kwaye iguqule ibe yikhemikhali zorhwebo eziluncedo i-acetone kunye ne-isopropanol.Oku kunokusisondeza kwi-bioeconomy ejikelezayo kwi-chemistry.
Kulo dliwano-ndlebe, i-AZoM ithetha no-Anna Walkiewicz, iNgcali yeZicelo kwi-Quorum Technologies, malunga nokugqoka isampuli kunye nendlela enokunceda ngayo ukuphucula i-SEM imaging.
I-Microtrac's Stabino Zeta yenza i-titrations ngokukhawuleza kakhulu ukumisela amandla e-zeta kunye nokuzinza kwe-colloidal.
Uluhlu lwe-BELPORE lweMicrotrac lwe-mercury porosimeters luhlalutya ngokuchanekileyo ubukhulu bepore ukusuka kwi-1mm ukuya kwi-3.6 nm.
I-Ion Science's Tiger sisixhobo esiphathwa ngesandla segesi esilungiselelwe ukubonwa kwe-VOC.Ibonelela ngovakalelo oluphezulu kunye nobhaqo oluchanekileyo.